सेवा विस्तार गर्दै तुलसी बाल हस्पिटल « Farakkon
दाङ,फागुन ५ । तुलसीपुरस्थित तुलसीवाल हस्पिटल प्रालिले सेवा विस्तार गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । फागुन ७ गतेदेखि उस्ले हस्पिटलमा सुत्केरी सेवा र सबैका लागि जनरल मेडिसिन सेवा समेत प्रदान गरिने भएको छ । नर्मल डेलिभरीदेखि सर्जरी सेवा समेत प्रदान गरिने बालरोग विषशेज्ञ डा. किशोर खत्रीले फरककोणलाई बताए ।
तुलसीपुरमा अनेत्र एनआईसियू सेवा उपलब्ध नभएको हुँदा आफुले सुत्केरी सेवा समेत दिन थालेको र त्यसले जटिल रोगका समस्या भएका नवजात सिशु तथा आमाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने खटरा टर्ने डा. खत्रीले तर्क गरे ।
फागुन ७ गतेदेखि नै तुलसी हस्पिटलले गर्भ जाँचदेखि,पाठेघर तथा सेतोपानी बग्ने जस्ता महिलाहरुको समस्याको पनि उपचार सुरु गर्ने भएको छ । तुलसी हस्पिटललाई जनरल हस्पिटलको रुपमा विकाश गरि तुलसीपुरमै स्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ पुरुषहरुका लागि समेत जनरल मेडिसिन तथा जनरल सर्जरी सेवा समेत प्रदान गरिने डा. खत्रीले जानकारी दिए ।
विक्रम संवत २०७१ साल मंसिरदेखि बालबालिकालाई मात्रै सेवा दिन सुरु गरेको तुलसी वाल हस्पिटलले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ दोघरेमा १०० वेड क्षमताको हस्पिटल निर्माणको कार्य समेत सुरु भएको जानकारी दिएको छ । आगामी वर्षदेखि दोघरे बाट सेवा दिने प्रयास हुने डा. खत्रीले बताए ।